Sunscreen Zebra Fabric Manufacturers & suppliers - China Anụmanụ Zebra Fabric Factory
Egwuregwu Electric White Dual Layer Roller Fabric Zebra Shade Blinds Shades
China ala Blind akwa
Maka ezinụlọ, enwere ike iji ákwà mgbochi kpuchie, kpuchido nzuzo, ma chọọkwa ụlọ ha mma. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ákwà ngebichi ọhụrụ nwere formaldehyde. Mgbe azụrụ ákwà ngebichi ọhụrụ ahụ n'ụlọ, enweghị ike kpọgidere ha n'egbughị oge. E kwesịrị ime ụfọdụ ihe iji belata ihe fọdụrụ na formaldehyde na ákwà ngebichi tupu ejiri ha eme ihe ọfụma. Ka anyi choro ikwuputa uzo mkpochapu methanol!
Ezi mma Blackout Zebra Window Roller Blinds na Shades Polyester Sunscreen Fabric
UV na Waterproof ala Blind Fabric
Zebra akwa nwere akwa okpukpu abụọ, nwere ike idozi mkpochapu ọkụ mpaghara ma ghara ịnwe oghere. Agba ahụ jupụtara ma dị ọcha, agba nke akwa dị elu bụ mkpụrụ na obi ụtọ, yana ọkwa agba ngwa ngwa dị elu ma na-eguzogide Sun, ọ naghị adị mfe ịpụ.
Uwe dị elu nwere ezigbo mbadamba, ọ dịghịkwa iko na-ehulata ma ọ bụ na-efegharị na ntụziaka obosara niile.
Ezi mma PVC ntekwasa Polyester Rainbow ákwà mgbochi Ugboro abụọ n'ígwé Zebra Blind Sunshade Fabric
Site na ntinye nke akwa mkpuchi, ndị mmadụ nwere ihe dị iche iche ahaziri iche maka akwa mkpuchi PVC, nke a na-ewu ewu akwa ákwà mgbochi sunshade na ọrụ mmiri na-ewu ewu.
Elu Ogo Dị ọnụ ala Ahịa Fire Retardant Zebra Blinds
Ọrụ nke zebra na-ekpuchi ákwà
Mgbe gauze na gauze gafere, ọkụ ahụ na-adị nro, nke nwere ike belata ìhè kpọmkwem ruo oke. Mgbe ákwà mgbochi ahụ na ákwà mgbochi ahụ dajụrụ, a na-egbochi ọkụ kpamkpam, ka e wee mezuo nzube nke igbochi ọkụ ahụ. E nwere ọtụtụ ụdị nke zebra blinds, na ụdị dị iche iche ga-enwekwa ọrụ dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, a na-ekewa ụdị ndị a dịka akwa eji.
Akwa ákwà mkpuchi Zebra na-adịkarị polyester, hemp na naịlọn. Dika ihe nkpuchi di iche iche di iche iche nke akwa, enwere ike kewaa ha na nkpuchi zebra, ihe dika akwa zebra na nkpuchi zebra. Shading mmetụta site na ala ruo elu.
High Quality Printing Butterfly Jacquard Sunscreen Zebra ala Blinds akwa
Nkasi obi nke ndi mmadu n'ime ulo di n'ime nwere otutu ihe, otutu onu ogugu ndi mmadu gbara gburugburu bu ihe di nkpa.
N'oge ọkọchị, radieshon nke anyanwụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ site na iko ga-eme ka ọnọdụ okpomọkụ nke radieshon ahụ dị n'elu ụlọ ahụ nke dị nso na windo ahụ na-abawanye nke ukwuu, na-enye ndị mmadụ mmetụta nke mmiri.
N'oge oyi, windo iko ahụ nwere obere okpomọkụ dị ala na-enye mmetụta nke radieshon oyi. N'otu oge ahụ, ikuku ikuku oyi nke ikuku oyi na-asọ n'akụkụ windo na-ewetakwa mmetụta nke ikuku oyi na-efe ndị nọ nso na windo ahụ, nke na-ebelata nkasi obi ndị mmadụ nke ukwuu.
Agba nke sunscreen zebra blinds fabric ga-ọ bụghị naanị na ọ ga-egbo mkpa nke okike ụlọ, kamakwa ị attentiona ntị na ngosipụta nke ìhè anyanwụ.
(1) Ọ bụrụ na etinyere ya n’èzí, ákwà ndị gbara ọchịchịrị nwere ikike siri ike igbochi okpomọkụ na-acha ka anyanwụ karịa ákwà ndị na-acha ọkụ ọkụ n’ihi na ọ dịghị mkpa ka ha tụlee agba ọchịchịrị nke ákwà ahụ; ọ bụrụ na ejiri ya n'ime ụlọ, akwa na-acha ọkụ ọkụ nwere ike igosipụta nke ọma.
Home DEC Ugboro abụọ Motorized Zebra Roller Window Blinds Shade Fabric
Mgbe anyị rutere gburugburu ebe obibi, ihe mbụ na-adọta anyị bụ ịchọ mma. Decochọ mma nke ọma nwere ike inye anyị mmụọ ọhụụ. Akwụkwọ ahụaja pụrụ iche, nwere ezigbo nhọrọ nke ákwà mgbochi, nwere ike iweta uto dị iche na ndụ mgbe niile. Taa, anyị ga-ewebata gị isi ụkpụrụ nke kenha akwụkwọ ahụaja na ákwà mgbochi gị mgbe anyị na-ahọrọ ákwà mgbochi. Ka anyị kwadebe ọmarịcha nrọ maka ndụ anyị.
Igwe eji kpuchie ihu igwe eji eji agba agba Zebra Solar Blind Shades Fabric
ndị kpuru ìsì na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịgbanwe agba ma mepụta ikuku na mma ụlọ. Ọ na-eleba anya na ịchọ mma. Otú ọ dị, ọ dịghị mfe inwe afọ ojuju na ịchọ mma. Mgbe ahụ, otu esi dakọtara splicing ákwà mgbochi?
E jiri ya tụnyere ákwà mgbochi agba siri ike nke ọdịnala, ákwà mgbochi a na-agbawa agbawa na-enwe mmekọahụ. Nwere ike ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị na agba dị ka mkpokọta mma ụlọ mma na mmasị onwe gị, wee mee ka oghere ahụ na-arụ ọrụ. Ugbu a, anyị ga-egosi gị otu esi dabaa na agba ndị ka mma!
New Design Blackout Day na Night Zebra Egwurugwu Roller Blind Fabric maka cochọ Mma
Ọkara translucent akwa: kwesịrị ekwesị maka oghere ụlọ ọrụ izugbe, na-enwe ike ikwurịta okwu na gburugburu ezigbo gburugburu.
N'abalị na ụbọchị abụọ kpuru ìsì Sunscreen Zebra Blinds Fabric
Ala Blind Day-Abalị-Zebra Onyunyo
Sunscreen zebra fabric na-emetụta ahụ ike ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi ya, meziwanye ike nke ọkụ ime ụlọ na nkasi obi nke gburugburu ụlọ, akwa mkpuchi a na-eme ka ọkụ nke na-abanye n'ime ụlọ dị nro na ntụsara ahụ, ma mekwaa uto eke, tinye mma nke gburugburu ebe obibi, ma na-eme ka ndị mmadụ zuru ike, akwa akwa abụọ nwere ike idozi ọkụ. Mgbe emeghere ìsì, anyị pụrụ ịnụ ụtọ n'èzí mara mma. Mgbe emechiri ìsì, a na-anọpụ iche kpam kpam site n'èzí, hụ na nzuzo ahụ.
N'èzí Manual Zebra Sun Screen Roller Blind Sunscreen Blinds Fabrics
A na-akpọkwa blinds Zebra dị ka yarn blinds blind, rainbow blinds, dimming roller blind, double layer roller blind. Uwe a kpara akpa nke ejiri obere iberibe na gauze na obosara hà nha abụọ dịpụrụ adịpụ site na ibe ya, na-edozi ya n'otu akụkụ, na-eji akụkụ ya ọzọ tụgharịa akụkụ nke ọzọ.
Mgbe gauze na gauze gafere, ọkụ ahụ na-adị nro, ruo n'ókè ụfọdụ, belata ìhè ọkụ. Mgbe akwa na akwa ahụ na-aga ụkwụ, a na-egbochi ọkụ kpamkpam, ka e wee mezuo nzube nke igbochi ọkụ ahụ. Mgbe ikpuchi ìsì ka ekwesiri imeghe ya, enwere ike ikpokọta isi. Ndị ịnyịnya ọhịa ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke akwa ahụ, ịdị mfe nke ndị kpuru ìsì, na ọrụ nbelata nke ndị kpuru ìsì. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma nwee ụdị ndo dị iche iche na-enweghị igbochi mpaghara ọhụụ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ọfịs na ime ụlọ windo mma.
N'èzí ternkpụrụ Windows Zebra Blind Roller Shades Jacquard Fabric
MagicalTex Sunscreen Fabric Win GREENGUARD Asambodo & GREENGUARD &mụaka na Schoolslọ Akwụkwọ
GREENGUARD na-ewebata ụkpụrụ ikuku dị n'ime ụlọ, na-enye nnwale nke atọ na nsị nke ngwaahịa kemịkalụ. Ọ na-enye ngwaahịa ngwaahịa ahụike dị mma ma meziwanye gburugburu ebe obibi. Ha bụ ọkọlọtọ maka ntụnyere na ọdịnaya maka LEED Green Building Rating System. GREENGUARD Environmental Institute, dị ka ụlọ ọrụ nhazi nke American National Standards Institute (ANSI) kwadoro ma kwadoro ya, guzobere ụkpụrụ siri ike maka ngwaahịa niile dị n'ime ụlọ, gụnyere ihe ụlọ, ihe ịchọ mma, arịa ụlọ, ihe ala, ihe ndị dị n'elu, agba na mkpuchi. , ndị nhicha na ngwaahịa ụmụaka ndị ọzọ n'ihe karịrị ngalaba 20.
123 Osote> >> Peeji nke 1/3